Tọrọ ntọala na April 2008, anyị ụlọ ọrụ mere ka na-emepe emepe elu mma carbon eriri products.Two mmepụta edoghi meghere na mmepe usoro nke mkpọpu ala, ịkpụzi, CNC nhazi.
Factory e kwagara Gaobu Town, Dongguan, Guangdong na afọ a, mmepụta ebe ruru 2500 square mita, na ihe karịrị 10 nkenke ngwá ngwá na zuru ezu ẹkesikpede injinia e kwukwara ka mma usoro. N'ihi ya, anya, e nwere ndị 4 nnukwu-ọnụ ọgụgụ mmepụta edoghi gụnyere carbon eriri mpempe akwụkwọ, carbon eriri tube, CNC nhazi na crafts.
Anyị ngwaahịa mma ISO-9001-2008 Quality usoro asambodo, ngwaahịa mma e kwalite, ndị magburu onwe ọnụego ruru 99%.
Anyị na-aga nke 13 Shanghai International Model ngosi, na ama okpono na aha nke 2015 kwa afọ TOP 10 a maara nke ọma ụlọ ọrụ.